Kukura kweSocial Customer Service | Martech Zone
Kukura kweSocial Customer Service
China, July 5, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Patinenge tichitaurirana nemakambani makuru avo vanoshuvira kutora iko kupinda mune vezvenhau, yekutanga nhevedzano yemibvunzo yatinovabvunza ndeyevashandi vevashandi. Nepo zvikwata zvekushambadzira zvichitarisa kune vezvenhau kusimudzira mameseji avo online, vatengi vemakambani aya vari kutarisira kuti inzira nyowani iyo yavanoda mhinduro.
From Bluewolf: Makambani ekumberi-kufunga arikuisa mari muzvishandiso izvo zvinongobata kwete chete vamiririri vevashandi, asi vese vashandi vazvo, zvine makwikwi. Tsvaga zviwanikwa zvinotsanangudza mafambiro aunoita yako tafura yebasa kuenda kune iyo gore, uye kuenzanisa iyo kune yakatarisana nevatengi tsika, inogona kukubatsira kukwikwidza uye kuhwina.
Heino yakakura infographic kubva kuBluewolf iyo inopa ruzivo mukukura kweiyo yemagariro vatengi vatengi
Uye heino pfupiso yekuti Bluewolf ingabatsira sei bhizinesi rako:
Ive neshuwa yekutora Bluewolf's Yemagariro Service Kubudirira Kit!
Tags: bhuruuMabatiro evatengiinfographickushamwaridzana nevatengi
Inbound Kushambadzira Kukwira
Klout inoshanda sei?